imprint & I-copyright - Ubuchwepheshe be-Hielscher Ultrasound
I-Hielscher Ultrasonics GmbH (I-Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
D-14513 iTeltow, eJalimane
Ucingo: +49 3328 437 3
ifeksi: +49 3328 437 444
Umqondisi wezokuphatha: Thomas Hielscher
I-Registry Commercial Commercial Potsdam: HRB 19012
I-VAT ayikho. (§27a UStG): DE 814 563 028
I-Hielscher Ultrasonics GmbH inikeza ulwazi oluvezwe kule webhusayithi ngokusekelwe kokulandela izaziso zomthetho
© Copyright 2008 – 2021 Hielscher Ultrasonics GmbH. Wonke Amalungelo Agodliwe. Yonke imibhalo, izithombe, ihluzo, amathrekhi omsindo, idatha yevidiyo nopopayi kanye nokwakheka kwayo noma ukwakheka kwayo kuvikelwe ilungelo lobunikazi neminye imithetho evikelayo. Okuqukethwe kwabo kungenzeka kungakopishelwa ukuthengisa noma ezinye izinhloso, futhi kungakhonjiswa, noma kunguqulo eguquliwe, kwamanye amawebhusayithi. Ukubeka izixhumanisi kuwebhusayithi ye-Hielscher Ultrasonics kuvunyelwe kuphela ngemvume ebhalwe ngaphambilini yi-Hielscher Ultrasonics GmbH. Sithanda ukuveza ukuthi izithombe ezithile eziboniswe kumawebhusayithi e-Hielscher Ultrasonics zingamalungelo obunikazi bezinkampani zangaphandle.
Uma kungashiwo ngenye indlela, zonke izimpawu zokuthengisa ezivezwe kumawebhusayithi we-Hielscher Ultrasonics zivikelwe yi-copyright.
Impahla yengqondo ehlinzekwe kumawebhusayithi we-Hielscher Ultrasonics, afana namalungelo obunikazi, izimpawu zokuthengisa kanye namalungelo okukopisha, avikelwe. Ayikho imvume noma ilayisense yokusebenzisa impahla yengqondo inikwe yiwebhusayithi yeHielscher Ultrasonics.
Amawebhusayithi we-Hielscher Ultrasonics athunyelwe ngokuzikhandla okukhulu. Okuqukethwe okuhlinzekwe kulawa mawebhusayithi kusebenza kuphela ngenhloso yokunikeza ulwazi futhi akuhambisani nomthetho. Sicela uqinisekise ulwazi ngaphambi kokulisebenzisa nganoma iyiphi indlela. Izitatimende zokubopha zingenziwa kuphela ngesicelo sangaphambili. I-Hielscher Ultrasonics GmbH inesibopho sokulimala ngamabomu kanye nokunganaki okukhulu ngokwemithetho yomthetho weMikhiqizo kanye kuphela neziqinisekiso ezicacile ezikhishwe yi-Hielscher Ultrasonics GmbH. Esimweni sokunganaki okuncane, i-Hielscher Ultrasonics GmbH inecala kuphela uma kwenzeka ukuphulwa komsebenzi, lapho inani lesicelo sokukhokha isinxephezelo likhawulelwe kuphela. Uma ubhekisela kumawebhusayithi e-intanethi noma okuqukethwe kwamanye amaqembu (izixhumanisi), i-Hielscher Ultrasonics ayithathi imithwalo yemfanelo yokuqukethwe kwamakhasi axhunyiwe. Ngokufinyelela kulezi zixhumanisi ushiya indawo yolwazi ye-Hielscher Ultrasonics GmbH. Ukuze uthole ulwazi oluhlinzekwe ngabangaphandle, kungase kube nezinqubomgomo ezahlukene ezivunyelwe, ikakhulukazi ngokuvikela idatha.
Ukushintsha kwenkonzo nemigomo yokusetshenziswa
I-Hielscher Ultrasonics GmbH inelungelo lokukhulisa, ukuvimbela noma ukushintsha isevisi noma izingxenye zalo nganoma isiphi isikhathi. Imvelo ye-intanethi isidinga ukuba silungise imigomo yethu yokusebenzisa ngezikhathi ezithile. Ngenxa yalesi sizathu, sicela ugcine izinguqulo zamanje zamagama okusetshenziswa.
Ukusetshenziswa kwezinsizakalo kanye nemigomo yokusetshenziswa jikelele ngaphandle kwemibango yemithetho umthetho waseJalimane usebenza kuphela.
Usuku oluphumelelayo: Okthoba 10, 2013
Ukuzibophezela kwe-Hielscher Ultrasonics Kuyimfihlo
Sicela ufunde inqubomgomo yethu yobumfihlo ebuyekeziwe lapha!